Soo bandhigida HostScore.net - Habka Cusub, Xogta-Daran ee Loogu Talagal dans Loo Doorto Martigaliyaha Websaydh
Tani waa ogeysiis qaas ah oo kusaabsan bilaabida mashruuceyda cusub HostScore.net – degel aan ku daabacno xogta waxqabadka martigelinta iyo cabbir sahlan oo la fahmi karo macaamiisha martigalinta webka.
HostScore ™ waa xisaabinta lahaanshaha, oo ku saleysan miisaanka isku darka xawaaraha server, waqtiga, tifaftiraha iyo qiimeynta isticmaaleha; taasoo muujineysa tayada adeegga martigelinta websaydhka. Algorithm-ka waxaa loo qaabeeyey qaab aan annagu milkiileyaasha u nahay, wuxuu yeelan doonaa kaliya 20% isagoo leh awood xisaabta dhibcaha.
1.1 Transparent + Dib-u-eegida Xogta Gawaarida
2.2 Xawaaraha (B)
Himilada aasaasiga ah ee HostScore waa in ay keenaan faahfaahin sax ah, xogta wadata xogta macaamiisha martigelisa websaydhka.
Transparent + Dib-u-eegida Xogta Gawaarida
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka maqnaa warshadaha ayaa ah hufnaan macaamiisha, iyo HostScore waxaa loogu talagalay inay xalliso taas. Waxaan doonayay inaan ku siiyo – dukaameeyeyaasha martigelinta, awoodda go’aannada iibsashadaada ee ku saleysan xaqiiqda, hufan, xog aruurinta marti gelinta dib u eegista iyo helitaanka xogta ceeriin lafeda.
Qaabdhismeedka HostScore iyo xisaabinta ayaa ah lagu daabacay barta. Xogteenna ayaa la isku ururiyay oo loo beddelay shaxooyin dhowr ah ee dib-u-eegistayada martigelinta our Xiriirkayaga aan la leenahay shirkadaha kale ee martigeliya ayaa si cad loogu shaaciyey bogga muujinta bogga muoginta bogga.
Waxaan rajeyneynaa, tani waxay caawin doontaa macaamiisha waxayna isla markaa ku boorinaysaa shirkadaha martigelinaya websaydhka inay kiciyaan kulankooda si ay ugu tartamaan.
Sidoo kale – HostScore.net waxay noqon doontaa madal lagu daboolo ma ahan kaliya magacyada martigalinta aasaasiga ah, laakiin noocyada martigelinta yaryar ee doonaya inay qabtaan macaamiisha cusub. Shakhsi ahaan waxaan saldhig u ahay Malaysiya; kooxdayda yar yar ee is-hoosaysiinta waxay ka kooban yihiin xubno ku nool Mareykanka, Talyaaniga, Ruushka, Filibiin, iyo Indonésie.
Waxaan aragnay wax badan oo wanaagsan, shirkadaha martigelinta yar yar ee laga cayriyay ganacsiga sababtoo ah tartanka caalamiga ah ee caddaalad darrada ah. Waxaan rajeynayaa dans HostScore est soo jiidato dareenka isticmaalaha kaliya ma ahan 5 – 10 noocyada caanka ah ee caanka ah; laakiin sidoo kale shirkadaha yaryar ee martigalinta maxalliga ah ee gobolkooda.
HostScore = (0,40 * A) + (0,30 * B) + (0,20 * C) + (0,10 * D)
«Uptime» waa cabirka helitaanka adeega waxayna xambaartaa miisaanka «35%» oo ah qaabkeena dhalinta.
Hoyga kormeerka aasaasiga ah ee hostScore wuxuu ku yaal Mareykanka. Haddii baaritaan ka socda meeshaas uu ku guuldareysto, xaaladda waxaa laga xaqiijinayaa meelaha kale.
«Xawaare» waa cabirka waqtiga jawaab celinta websaydh (ee millise seconds, ms) wuxuuna leeyahay miisaan 30% oo ah nooca dhibcaha ee hostScore. Nidaamkeena Waqtiga aqoonsiga TCP en millisecondes (ms) – tirada hooseysa, ayaa dhakhso u leh degelka.
Xawaaraha martigelinta ayaa la tijaabiyaa saacad kasta oo 4 ah oo ka socota goobaha 10 ee adduunka. Halbeegyo xawaare duwan ayaa loo isticmaalaa marti-gelinta iyo marti-gelinta VPS. Waxaan rajeyneynaa degellada lagu martiqaaday qorshayaasha VPS iyo Websaydhada Websaydhka inay si dhakhso leh u hawl galaan.
Dhibcaha tifaftiraha ” Editor ‘Score Score’ wuxuu xambaarsan yahay miisaanka ‘20% ‘iyo qodobbada astaamaha kale ama waayo-aragnimada lagu xusay inta lagu jiro nidaamka dib-u-eegista. Sababta aan uga tageyno ‘20% ‘oo leh awoodda nidaamka ayaa ah maxaa yeelay waxaa jira wax badan oo marti-gelinta webka ah oo aan ka aheyn kaliya waqtiga iyo xawaaraha, à kastoo ay yihiin tixgelinno muhiim ah. Tan waxaa ka mid ah waxyaabo ay ka mid yihiin sida kor loogu qaaday qibradda dul-joogga ah, haddii taageerada macmiilku tahay mid dhakhso leh oo waxtar leh, astaamaha laga yaabo inay ku soo bandhigaan martigaliyayaasaaaaaaaaa.
Dhibcaha Isticmaalaha "wuxuu ku saleysan yahay qiimeynta isticmaale ee la xaqiijiyey (hadda waxaan hubinay isticmaaleyaasha Facebook ama astaannada LinkedIN). Hadda waxaan isticmaalayaa Khadka Dhexe ee Wilson Score (sharaxaad dheeri ah halkan) xuduudo hoose, xadka kalsoonida 95% si loo kala saaro dib u eegista isticmaala. Habka ayaa ahaa la xaqiijiyay inay ka shaqeeyaan nidaamyada kor-u-qaadista / hoos u-dejinta kuwaas oo ku badan internetka. Qiimaynta isticmaalaha ayaa ku kordhisa 15% xisaabinta HostScore.
Jawaabtaada Maxaad u malaynaysaa ku saabsan HostScore? Fadlan ii sheeg waxa aad u maleyneyso adiga adoo adeegsanaya foomkan la xiriirka ou kaliya iigu soo dir twitter.
Jacaylka Bulshada HostScore waa shidaa Twitter, Facebook, Iyo LinkedIn. Fadlan ku xidhnow, wadaag, comme, noogu soo dir saaxiibbadaa iyo kuwa raacsan.
Noo soo bandhig faallooyinkaaga martigelinta 15% ee HostScore waxaa lagu go’aamiyaa dib u eegista isticmaalaha. Marka dib u eegis badan ee isticmaaleyaasha aan sameysanno, ayaa sida ugu wanaagsan ee qaabkeena qiimeynta ah u shaqeyn doonaa. Marka fadlan ka tag faallooyinkaada martigelinta ee HostScore.net.
Tani waa ogeysiis qaas ah o kusaabsan bilaabida mashruuceyda cusub HostScore.net – degel aan
Tani waa ogeysiis qaas ah oo kusaabsan bilaabida mashruuceyda cusub HostScore.co.id – degel aan
Vias ad Blog ב 6 הרשמות לדוא”ל